Etazonia: Fihetsiketsehana manohitra ny fanondranana olona · Global Voices teny Malagasy
Etazonia: Fihetsiketsehana manohitra ny fanondranana olona
Voadika ny 05 Septambra 2009 20:17 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Olana mbola tsy re tsaika matetika ny fanondranana olona any Etazonia satria afenina amin'ny besinimaro (ny momba) izay niharan'izany. Andevozina ho amin'ny asa an-tsokosoko any anaty toeram-piasana miafina tsy manara-dalàna na any amin'ny toerana fivarotan-tena miafina any. Mazàna dia zaza tsy ampy taona no tena lasibatry ny fikambanan-jiolahy ka aondrana any Etazonia.
Ny fikambanana Stop Child Trafficking Now (Ajanony ny Fanondranana ankizy) no manombatombana fa ankizy maherin'ny 2.5 tapitrisa – ankizy vavy no ankabeazany – isan-taona no amidy any amin'ny tsenan'ny fivarotantena. Zaza hatramin'ny 4 na 5 taona dia efa lasibatra, matetika angalarina any an-tranony ary tsy hita intsony. Fikambanana miaro ny zon'olombelona sy olona hafa no mampahafantatra ny olona izany olana izany, ary mandray anjara amin'ny ady atao amin'ny fanondranana olona any Etazonia, sady manampy ireo niharan'izany ka mbola voagejan'ny tambajotran'ny mpanondrana olona.
Sarin'ny firaisankinan'ny fanoherana any Los Angeles avy amin'ny aclu.socal ary voaaron'ny Creative Commons license.
Ao amin'ny bilaogy nampitondraina ny lohateny hoe “Iza no mangalatra ny ankizy vavikely mainty hoditra?” ilay mpitoraka bilaogy sady mpanohana ny hetsika hiadiana amin'ny fanondranana olona, Amanda Kloer, no manoratra mikasika ny olana fangalarana zaza afrikana -amerikana io any Etazonia:
Manerana an'i Etazonia dia mahatratra 800 000 isan-taona ny zaza very ka ny 33% amin'izy ireny dia zaza afrikana-amerikana. Any New York tamin'ny taon-dasa dia mainty hoditra ny antsasaky ny zaza very ka ny 60% amin'izany no ankizy vavy. Any amin'ny tanàn-dehibe hafa toa an'i Atlanta, Washington DC, Chicago sy Los Angeles izay ahitana afrikana-amerikana maro dia ahitana ankizy vavy mainty hoditra maro very na “mitsoaka”. Kanefa inona no zavatra mihatra amin'ireny ankizy ireny? Manjavona fotsiny amin'izao ve izy ireny?
Very izy, azo antoka fa any an-davaky ny fivarotan-tena; zary lasa lasibatry ny orinasa mpampiasa makorela izy ireny. Mifanena amin'ny mpivaron-tena eny an-dalana ny sasany ary voasintona koa hijorojoro eny amin'ny sisin-dalana. Ny sasany indray terena hiditra any amin'ny club mpampiasa olona miboridana na mpanao sary mihetsika mamoafady. Ny sasany koa avoaka any amin'ny vohikala mpandefa antso madinika, any amin'ny vohikala mitady vehivavy sy any amin'ny aterineto rehetra any. Lasibatry ny fanondranana olona izy ireny ary mitovy lenta amin'ny vehivavy any Vietnam izay andevozina any amin'ny fanaovana makorela any Thailande izay ahitana ankizy vavy kely avy any Goatemala nohidiana tao anaty trano iray tany El Paso.
Luis C deBaca, masoivohon'i Etazonia ao amin'ny Departemantam -panjakana, tompon'andraikitry ny bilaogy Office to Monitor sy ny Ady amin'ny Fanondranana olona no manoratra mikasika ireo loza mitatao amin'ny tanora any Etazonia. Nampanao fiofanana ireo matihanina mikarakara ankizy tahaka ny mpampianatra izy vao tsy ela izay.
Izay rehetra mikarakara tanora dia tokony hahatsapa ny loza mitatao amin'ireo mpianatra. Lasa fitaovana fanaovana varo-maizina ny teknolojia, miaraka amin'ireo resadresaka ao amin'ny internet izay tsy ampiasaina fotsiny hifanakalozana trano na fanaka, fa lasa resaka hanaovana fotoana hivarotan-tena. Mampiasa ny fifampiresahana (karajia=chat) sy ny resaka mandeha ary ireo vohikala voafantina ireo mpanao izany hahazoana vaovao mikasika ny toerana hahitana haza. Ny zazavavy tena mety dia ireo heverina ho “very” na ireo nandositra ny ankohonany. Tandindonin-doza izy ireo satria mety ho lasa mpivaron-tena, ka mety lambolamboina amin'ny fampanantenana fitiavana sy fiarovana, ny tanjona anefa dia ny hanipazana azy ireo any amin'ny tontolon'ny faharatsiana sy ny herisetra.
Mampiseho ny lisitr'ireo toerana eran-tany azo hitoriana ireo fampijaliana mifandraika amin'ny fanondranana olona koa i C deBaca ao amin'ny bilaoginy, na koa ireo zava-mitranga mampiahiahy any amin'ireo ONG iraisam-pirenena sy ny mpiara-miasa amin'ny fanjakana.
Mba hanairana bebe kokoa ny fahatsiarovan-tenan'ny tsirairay dia misy koa ireo olona miasa ao amin'ny sehatry ny lalàna amin'ny anaran'ny tenany manokana, tahaka ilay mpanao sary mihetsika Tara Hurley, izay miasa ao amin'ny fanjakany ao Rhode Island. Ao amin'ny bilaoginy izy no milaza ny heviny momba izay tokony hatao hampanan-kery kokoa ny lalàna:
Miaro ny volavolan-dalàna aho. Manantena aho fa ny volavolan-dalàna nataon'ny loholona Perry no hotanana sy hahazo fankatoavana eo anivon'ny loholona. Heveriko fa ny zavatra tena lehibe indrindra amin'ny lalàna mikasika ny fanondranana olona dia ny fanofanana. Ahoana moa no hahafahan'ny mpitandro ny filaminana mamantatra ireo niharan-doza raha tsy hofanina izy ireo? Tsy maintsy manangana rafitra maty paika isika amin'ny fomba hitondrantsika ireo niharan'izany. Tsy maintsy entintsika ho tahaka ny niharan-doza izy ireo fa tsy tahaka ny meloka.
Tsy mitovy hevitra amin'ny fampahalalam-baovao sasantsasany koa izy ny amin'ny famaritan'izy ireo ny zava-mitranga, tohanany amin'ny tantaran'ilay ankizy vavy 16 taona niseho vao haingana:
Ny tena tsy azoko dia hoe maninona ny fampahalalam-baovao no tsy milaza mihitsy hoe “fanondranana olona” no miseho ankehitriny. Efa nandritra ny taona maro no nitaky ny hanovana ny fitsipika harahina any amin'ny trano fanorana aziatika ireo fampahalalam-baovao ireo. Ankehitriny anefa, tena misy niharan'izany fanondranana olona izany dia tsy tononiny ho niharan-doza ilay olona fa nataony hoe “nandositra” indray?!?!
Fanampin'izany, fikambanana maro manerana ny firenena tahaka ny Stop Child Trafficking Now no mampiasa ny fampahalalam-baovaon'olo-tsotra hizarana teny mikasika ny ezaka atao hiadiana amin'ity olana ity. Mpikarakara ny DC Stop Child Trafficking Now Walk no miteny fa ity no hetsika goavana indrindra hiadiana amin'ny fanondranana olona hatramin'izay. Mampiasa ny twitter ny Austin-based Child Trafficking Now Walk ary manasa ny rehetra hiombona aminy amin'ny dia atao amin'ny lalana 5km.
Raha araka ny hevitro manokana, Tina Frundt, mpiara-dia amin'ny ady amin'ny fanondranana olona any Washington DC, no nizara ny tantarany manokana amin'ny maha niharan'izany taminy. Ny zavatra niainany no nahatonga azy hanangana ny fikambanana Courtney’s House , izay hanampiany ireo tanora tafala tao anatin'ny tsikombakomban'ny fanondranana olona.